Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: YAADA FARRA GANDUMMAA
Rakkina/dadhabina Oromeessuu (Claiming the Problem)! Rakkina/Dhadhabina outsource gochuu dhiisuu! Joint and Several Oromo Responsibility and Solution'
Theory Oromummaa haga har'aatti jiru yoo ilaalle, yeroo mara yaada sabboonummaa waliin walqabatee ka'a. Kana jechuun, Oromummaan keenya dudhalee gaarii fi bareeda (positive values) ykn ammoo cimina keenya qofaa irratti kan hundeeffamedha.
Haata'uuti, faayidaa Oromummaa irraa argannu caalmaatti babal'isuuf, rakkoolee mana keessaa qabnu hundumaa Oromeessuu (Oromization) gochuu qabna jedheen amana. Rakkina garee tokkoo rakkina Oromoo maraa goonee ilaaluu qabna natti fakkaata.
Kana jechuun, rakkoon garee ykn naannoo tokkoon yoo uumame, rakkoon ykn hanqinni uumame sun rakkina ganda tokkoo qofa osoo hintaane, hir'ina Oromoo maraati jennee fudhachuu qabna. Rakkoon ganda tokkoo rakkoo Oromoo hundumaa ta'ee ilaalamuu qaba jechuudha. Akkuma Oromummaa keenya dudhaalee positive ta'e kaafnee waliin hirannu, rakkoo jirus waliin hirachuu qabna jechuudha. (Sharing the strength and sharing the weaknesses too)
Akkuma Cimina ganda tokkoo waliin hirannu rakkina ykn dadhabina ganda tokkoos waliin hirachuu qabna. FKNf: Atileetoti keenya yeroo mara gara Arsii irraa dhufanii wayita fiigicha mo'atan, hundi keenya gandummaa osoo hintaane Oromummaa keenya kaasnee dhaadanna. Wayita hanqinnii ykn dadhabinni maqaa gandaatiin as bahu immoo wal-arrabsina. Kun sirrii natti hinfakkaatu. Hir'ina adda biroos walumaan dhuunfachuu qabna. Cimina ganda tokkoo waloon akkuma claim goonu hir'ina bifa ganda qabatee mul'atu yoo jiraate, isas walumaan claim gochuu qabna. (Jointly claiming the problem and the solution)
Gabaabumatti, Tokkummaan Oromoo fi Oromummaan karaa lama cimuu danda'a: Oromummaa cimina irratti hundaa'ee (strength or positive value based Oromummaa) fi Oromummaa Dadhabina ykn rakkina keessaa irratti hundaa'e jechuudha. Gaarummaa fi gadhummaa keenya waliin dhuunfachuu qabna.
PS: Gandi bakka itti dhalatani male hundee eenyummaa miti. There is NO Wollega identity, Arsi identity, Harage identity, Shawa identity or Borana identity. But There is an Oromo identity.
Posted by Hasan Ismail at 2:07 PM